လွတ်လပ်သော မွန်သတင်းအေဂျင်စီ - ပြည်သူ့စစ် အသွင်ပြောင်းရန် အင်အားစုဆောင်းလျက် ရှိသည့် မွန်အမျိုးသား ငြိမ်းချမ်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့က ဒေသခံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံ အခွန်ငွေ မတန်တဆ ကောက်ခံနေကြောင်း သိရှိရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် (၂၀၀၉) ခုနှစ်တွင် မွန်အမျိုးသား ငြိမ်းချမ်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းလိုက်ပြီး လက်ရှိတွင် ၎င်းတပ်ဖွဲ့၏ ဒုဥက္ကဌ၊ ယခင် ရာမညတပ်ဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် နိုင်ရှောင်း ဦးဆောင်သည့် အုပ်စုက မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ် လမိုင်းမြို့နယ်ခွဲအတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံ ကောက်ခံနေခြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်းအဖွဲ့မှ ထိုင်းကောလက်ဖုန်းပိုင်ရှင်များ၊ သစ်စက်၊ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်များထံတွင် ကောက်ခံနေပြီး ဖုန်းပိုင်ရှင်တစ်ဦးလျှင် တစ်သိန်းကျပ်၊ သစ်စက် ဆန်စက်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးလျှင် ငါးသောင်းကျပ်နှုန်း ကောက်ယူနေကြောင်း ကောလက်ဖုန်းပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
“သူတို့ရဲ့ စစ်ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့ လာကောက်သွားတယ်၊ ကောက်တာချင်းက မတူဘူး၊ သူနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ လူတွေကို လျှော့ပြီး ကောက်တယ်” ဟု သောင်ပြင်ရွာမှ ကောလက်ဖုန်းပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
၎င်းတပ်ဖွဲ့မှာ စစ်အစိုးရ ကမ်းလှမ်းထားသော ပြည်သူ့စစ် အသွင်ပြောင်းရေးအတွက် မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ အနားယူထားသည့် တပ်သားဟောင်းများနှင့် လူကုန်ကူးသူများအား ၎င်းတပ်ဖွဲ့သို့ ဝင်ရန် လိုက်လံစုဆောင်းနေကြောင်း နီးစပ်သူများထံမှ သိရသည်။
သောင်ပြင်ရွာရှိ တိုးချဲ့ရပ်ကွက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်ရှိ မြေကွက်တချို့ကိုလည်း အဆိုပါအဖွဲ့က သိမ်းယူခဲ့ကြောင်း သောင်ပြင်ရွာသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “လမိုင်းဘက်ကို ထွက်တဲ့လမ်းက မြေကွက်တွေကို သိမ်းတာ။ သူတို့က ဒီလိုသိမ်းဖို့ ရေး(မြို့)ကနေ စစ်တပ်ဆီက အမိန့် ရထားပြီးသားတဲ့၊ အဲလိုပြောပြီး သိမ်းတာ၊ အသိမ်းခံရတဲ့ မြေပိုင်ရှင်တွေက ဘယ်သူ့ဆီ အကြောင်းကြားရမလဲ မသိလို့ ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
မွန်ပြည်နယ် မုဒုံမြို့နယ်၊ သံဖြုဇရပ်မြို့နယ်နှင့် ရေးမြို့နယ်တို့တွင် တပ်သားများကို လိုက်လံစုဆောင်းနေပြီး ယခုနှစ် မေလဆန်းတွင် သံဖြုဇရပ်မြို့နယ်၌ အခြေခံပြည်သူ့စစ်သင်တန်း ပို့ချခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း လိုအပ်သည့် အရေအတွက် မပြည့်မီသေးကြောင်း သိရသည်။
၎င်းတပ်ဖွဲ့အတွက် လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ကား ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်လိုင်း ပြေးဆွဲခြင်း၊ အခြားလိုင်းပြေးဆွဲသော မော်တော်ယာဉ်များထံမှ ဂိတ်ကြေး ကောက်ခံခြင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အခွန်ကောက်ခံခြင်းများကို စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တို့မှ ခွင့်ပြုထားသည်။
လတ်ရှိတွင် မွန်အမျိုးသား ငြိမ်းချမ်းကာကွယ်ရေးတပ်ကို ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘာအံမြို့နယ် ကော့ယက္ခအထူးဒေသ (၁) တွင် အခြေချထားသည်။ ဥက္ကဌမှာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ စစ်ဦးစီးချုပ်တာဝန်မှ အနားယူခဲ့သည့် နိုင်အောင်နိုင် ဖြစ်ပြီး ဒု ဥက္ကဌမှာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ အနားယူခဲ့သည့် ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း နိုင်ရှောင်း ဖြစ်သည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 6:08 AM 1 comments
ရန်ကုန်တွင် တစ်လကျော်နေသူများ အိမ်ထောင်စုအသစ်လုပ်ရသ
လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ- ရန်ကုန်မြို့ရှိ အဆောင်နှင့် အိမ်များတွင် တစ်လကျော်လာရောက်တည်ခိုသည့် နယ်အသီးသီးမှ ဧည့်သည်များနှင့် ကျောင်းသူ/သားများသည် အိမ်ထောင်စုစာရင်းအသစ် ထပ်မံလုပ်ဆောင်နေရသည်။
“အရင်ကဆို ဧည့်စာရင်းတိုင်ရတာလောက်ပဲ၊ ဇန်နဝါရီလကတည်းကစပြီးတော့ အိမ်ထောင်စုစာရင်းအသစ် ထပ်လုပ်ရတယ်၊ တယောက်ကို ၅၀၀၀ ပေးရတယ်” ဟု ဗဟန်းတိုက်ခန်းငှားနေသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် တလကျော်ခန့်နေထိုင်သူများမှာ ဧည့်စာရင်းဖြင့် နေထိုင်ခွင့်မရဘဲ အိမ်ထောင်စုအသစ်ပြုလုပ်ရပြီး ၄င်းအိမ်ထောင်စုအသစ်ဖြင့်သာ နေထိုင်ခွင့်ရသည်ဟု ဗဟန်းတွင် တိုက်ခန်းငှားခဲ့သည့် မနှင်းပွင့်က ပြောပါသည်။
“လဝကဌာနက ရပ်ကွက်မှာနေတဲ့ လူနေဦးရေ အရေအတွက်ကို ယူတာလို့ ပြောတယ်” ဟု မနှင်းပွင့်က ဆိုပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ တိုက်ခန်းငှားနေသူများ အဆောင်နေသူများ တစ်လကျော်နေထိုင်သူတို့အတွက် အိမ်ထောင်စုစာရင်းအသစ်သဘောဖြင့် မိမိ၏ မှတ်ပုံတင်နှင့် မိမိဇာတိလိပ်စာ၊ မိဘအမည်နှင့် ရန်ကုန်ရှိအလုပ်အကိုင်တို့ ပေးရသည်။
အများအားဖြင့် တိုက်ခန်းငှားနေသူများသည် အိမ်ရှင်နှင့် ၆ လ စာချူပ်ချုပ်ထားရပြီး၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် စုပေါင်းနေထိုင်ကြသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်ကုန်သည့်အထိ ဧည့်စာရင်းသာတိုင် အပတ်တိုင်း တိုင်ကြားရပြီး တယောက်လျှင် ၅၀၀ ပေးရသည်။ လူအပြောင်းအရွေ့ရှိရင်လျှင် ရပ်ကွက်ရှိ လဝကရုံးသို့ အကြောင်းကြားထားရသည်။ ယခုနောက်ပိုင်း ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ ရက်ရှည်နေသူများအတွက် အိမ်ထောင်စုစာရင်း လုပ်ရမည်ဟု လဝကရုံးမှ ညွှန်ကြားထားသည်။
ယခုလို လဝကမှ ဧည်စာရင်းလုပ်ခိုင်းနေတာဟာ ရပ်ကွက်အတွင်း နေထိုင်သူများ စာရင်းအတိအကျ သိရှိလိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု လဝကမှပြောသည်။
“၆ လပြီးတော့ စာချုပ်ထပ်ချုပ်ရင် လဝကရုံးကို တစ်ခါသွားရအုံးမယ်၊ အဲဒီမှာ လူပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင် သူတို့ကို အကြောင်းကြားရအုံးမယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းလာတည်ရင်လည်း ဧည့်စာရင်းတိုင်းရတယ်၊ အဲဒီအတွက် ၅၀၀ ပေးရတယ်” ဟု မနှင်းပွင့်က ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ပေါ်တွင် နယ်အသီးသီးမှ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်နေသည့် ကျောင်းသူ/သားများနှင့် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် သင်တန်းတက်နေသည့် လူငယ်အများစု တိုက်ခန်းငှားပြီး စုပေါင်း နေထိုင်ကြသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 6:16 AM0comments
ထားဝယ်- ရေးကားလမ်းပိုင်း ကြားဖြတ်ဂိတ် ပိုကောက်လာ
မင်းတော်လဝီ ။ ။ထားဝယ်-ရန်ကုန် ကားလမ်းအကြားရှိ ထားဝယ်-ရေးလမ်းပိုင်းတွင် ခရီးသည်တင်ကားများနှင့် ကုန်တင်ကားများကို ကြားဖြတ်စစ်ဆေးရေးဂိတ် တိုးလာသဖြင့် ဂိတ်ကြေးပိုပေးနေရသည်။
“ရေဖြူဂိတ်၊ ကလိန်အောင်ဂိတ်၊ မလွှဲတောင်ဂိတ်နဲ့ ရေးမြို့အဝင်ဂိတ်ကြီးတွေကို ဂိတ်ကြေးပုံမှန်ပေးနေရပေမယ့် အခုကဂိတ်ကြီးတွေကြားက လုံခြုံရေး ကင်းစခန်းတွေရော လှည့်ကင်းနဲ့ဆုံတဲ့အခါ ကားကိုရပ်ပြီး ပိုက်ဆံပေးနေရတယ်” ဟု ရွှေလီအိပ်စပရက်စ် ကားသမား ဦးတင်လေးက ပြောသည်။
မှန်လုံခရီးသည်တင်ကားတစ်စီးတစ်စီးလျှင် ကျပ် ၁၀၀၀ ပေးနေရပြီး တခြားခရီးသည်တင်ကားငယ်များက ကျပ် ငါးရာ ပေးရသည်။ ၁ဝ ဘီးကုန်တင်ကားများကို ကျပ်တစ်ထောင်အထက် ပေးရသည်ဟု ကောင်းသစ်စံ ခရီးသည်တင်ကားမှ ဦးတင်ထွန်းက ပြောသည်။
“ပုံမှန်က ဂိတ်ကြီးကိုရောက်ရင် အောက်ဆင်းလမ်းလျှောက် မှတ်ပုံတင်စစ်တယ်၊ အခုတော့ ဘာဂိတ်မှမရှိဘဲနဲ့ ရဲ၊ ပြည်သူ့စစ်နဲ့ စစ်တပ်ပေါင်းပြီး ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် နေ့က အထူးစစ်ဆေးရေးဆိုပြီး ဂိတ်ကြီးမရောက်ခင် ကြားနေရာတွေမှာလည်း စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်တယ်” ဟု ကားသမားတစ်ဦးက ပြောသည်။
“အဖွဲ့တွေက ခရီးသည်တွေကို စစ်ဆေးနေတုံး ကားနောက်လိုက်ကိုခေါ်ပြီး ငွေတောင်းတယ် ငွေမြန်မြန်ပေးရင် ကားထွက်ခွင့်မြန်မြန်ရတယ်’’ ဟု ရွှေလီမှန်လုံကားမှ ခရီးသည်တဦးက ပြောသည်။
ထားဝယ်- ရေးမြို့ထိ ကားလမ်းပိုင်းမှ မလွှဲတောင်မြောက်ဘက်ခြမ်း- ရေးမြို့ထိသို့ လုံခြုံရေး ကိုတာဝန်ယူနေသည့်ခမရ (၂ဂ၂) တပ်ရင်းနှင့် ခမရ (၂၉၉) စစ်တပ်တို့သည် ၄င်းတို့နယ်မြေတွင်း ဂိတ်အရေအတွက်အများဆုံးနှင့် ဂိတ်ကြေးတောင်းခံမှုအများဆုံး ဖြစ်သည်ဟု ကားသမားများက ပြောသည်။
ထားဝယ်- ရေးကားလမ်းပိုင်းနှင့် ရေး- မော်လမြိုင်တို့သည် မော်လမြိုင်- ရန်ကုန် ကားလမ်းပိုင်းကဲသို့ လုံခြုံချောမွေ့မရှိသလို လုံခြုံစိတ်ချမှုလည်းမရှိသဖြင့် ထားဝယ်မှ မော်လမြိုင်အထိ ညကားများပြေးဆွဲခြင်းခွင့်မပြုပါ။
“တချို့ခရီးသည်တွေ ထားဝယ်ကနေ မော်လမြိုင်အထိ မီးရထားနဲ့လာပြီး ညနေ၇ နာရီထွက်တဲ့ ရန်ုကုန်မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ သွားကြတယ်။ ထားဝယ်-ရန်ကုန် ကားခထက်ဝက်လောက် ဈေးသက်သာတယ်” ဟု ထားဝယ်ခရီးသွား ဦးမောင်ချိုက ပြောသည်။
ထားဝယ်- မော်လမြိုင်ကားလမ်းတလျှောက် မော်လမြိုင်- ရေးမြို့နယ်မလွှဲတောင်ထိပ်အထိ အေကို (AK) ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်သည်ဟု ထားဝယ် -မော်လမြိုင်ခရီးသည်တဦးက ပြောသည်။
မုတ္တမရန်ကုန်ကားလမ်းပိုင်းမှာ ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ယူပြုပြင်တည်ဆောက်ပြီး လမ်းအသုံးပြုခ အကောက်အခွန်များကိုရရှိသည်၊ ယနေ့အခြအနေမှာမုတ္တမရန်ကုန်ကား လမ်းပိုင်းသည် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှုနည်းပါးလာသဖြင့် လမ်းပျက်စီစပြုလာသည်။
သို့သော် လမ်းအသုံးပြုခ တိုးပြီးကောက်ခံလျှက်ရှိသည်ဟု မော်လမြိုင်-ရန်ကုန်မှ ရာဇာမင်းခရီးပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မှ ယာဉ်မောင်းတဦး ပြောသည်။
လမ်းအသုံးပြုခတိုးကောက်သည့်အတွက် နေတွက်မကာမိသောကြောင့် ဟိုင်းဝေးခရီးသည်တင်ကားငယ်များမှာ မော်လမြိုင်-မုဒုံခရီးအမည်ခံဖြင့်သာ ဂိတ်ကြေးပေးကြသည်။
ယခင်ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ဂိတ်ကြေး၊ မြို့ဝင်ကြေးများ ကောက်ခံသည့်နေရာတွင် အေကိုကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ဝင်ရောက်ကောက်ခံနေသည်။ အေကိုကုမ္ပဏီသည် မော်လမြိုင်-မုဒုံမြို့နယ်အကြားရှိလမ်းဘေးဝဲယာများကို ချဲ့ထွင်ပြုပြင်နေသော်လည်း သံဖြူဇရပ်မှ မလွှဲတောင်အထိ လမ်းပြုပြင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 6:15 AM0comments
ကျောင်းသားများ အင်တာနက်ဖြင့် အခက်အခဲဖြစ်
ကျလွန်းထော။ ။မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ/သားများ အဓိကမေဂျာအလိုက် လက်တွေ့ရှာဖွေသည့်စာတမ်းတစ်ခုကို အင်တာနက်တွင် ရှာဖွေရသည့်အတွက် ကျောင်းသူ/သားမျာ အခက်အခဲဖြစ်နေသည်ဟု သိရသည်။
အင်တာနက်တွင် ပထမဦးဆုံး ရှာဖွေရသည့်အတွက် မည်သို့လုပ်ကိုင်ရမည်ကို မသိသည့်အပြင် လိုင်းမကောင်းသည့်အတွက် ကွန်နက်ရှင်ခဏခဏကျသည်ဟု တတိယနှစ် ဓာတုဗေဒ ကျောင်းသားတစ်ဦးက ဆိုသည်။
“ဆရာမပေးတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ရိုက်ထည့်လိုက်တော့ အများကြီးပေါ်လာတယ်၊ ဘယ်ဟာယူလို့ ယူရမလည်းတောင်မသိဘူး၊ တချို့ဟာတွေက ကျတော်တို့လည်း နားမလည်ဘူး၊ ရှာနေတုန်း အင်တာနက်ကျသွားတာလည်းရှိတယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေ တစ်ခါမှမလုပ်ဖူးဘူး၊ အင်တာနက်မှာရှာပြီး လုပ်ရတာ ဒါပထမဦးဆုံးပဲ” ဟု ဓာတုဗေဒကျောင်းသားက ပြောသည်။
ကျောင်းတွင်းရှိ ကွန်ပျူတာများကို ကျောင်းသားများ သုံးစွဲပိုင်ခွင့်မရှိသည့်အတွက် ပြင်ပဆိုင်များတွင် လုတက်နေရကြောင်း၊ လျှပ်စစ်မီးမမှန်သည့်အတွက် အင်တာနက်အတက်အကျမမှန်ကြောင်းနှင့် အင်တာနက်သုံးတတ်သည့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား အနည်းအကျဉ်းသာ ရှိသည့်အတွက် ထိုသို့ရှာဖွေရာတွင် အခက်အခဲကြုံရသည်ဟု အဆိုပါကျောင်းသားက ပြောသည်။
ထိုသို့ ရှာဖွေရန် တစ်ဖွဲ့လျှင် ကျောင်းသား (၁၀) ဦး ဖွဲ့စည်းထားပေးပြီး သတ္တဗေဒကျောင်းသားများက တိရိစ္ဆာန်များကို ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် အင်တာနက်တွင်ရှာဖွေခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးရသည်။ အခြားမေဂျာဘာသာရပ်မှ ကျောင်းသူ/သားများလည်း ၄င်းတို့မေဂျာအလိုက် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြုလုပ်ပေးရသည်။
“ဒီနှစ်က စည်းကမ်းတင်းကြပ်တာများတယ်၊ ဒီလိုလက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ရတာကလည်း ဒီနှစ်မှစတာလေး၊ ပါမေက္ခတွေပြောတာတော့ ကျောင်းတာပြီးသွားတယ် ဘာမှလက်တွေ့မရှိလို့ ဒီလိုမျိုး ကျောင်းသားတွေကို လက်တွေ့လုပ်ခိုင်းဖို့ အထက်က လာညွှန်းကြားသွားတာ” ဟု နောက်ဆုံးနှစ် (Zoology ) သတ္တဗေဒ ကျောင်းသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဓါတုဗေဒ တတိယနှစ်ကျောင်းသားက “ကျတော်တို့လို chemistry သမားတွေဆိုရင် အတိုင်းပိုင်ဆရာမက Sodium Silicate (Na2 SiO3) ခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်၊ အဲဒါကို အင်တာနက်မှာ ရှာပြီးရင် ဆရာမကို တင်ပြပေးရတယ်၊ ပြီးတော့ သူမေးတာကို ပြန်ဖြေပေးရတယ်၊ ရှာတာနဲ့ စုပြီး ပြန်လုပ်တာ (၃) ပတ်လောက်ကြာသွားတယ်၊ အခု ကျတော်တို့အဖွဲ့ အတန်းပိုင်ဆရာမကို ပေးပြီးသွားပြီး ဆရာမတော့ ဘာမှမပြောရသေးဘူး” ဟု ပြောသည်။
မေဂျာအလိုက် လက်တွေ့လုပ်ရသည်မှာ ကျောင်းသားများအတွက် ပညာပိုင်းတွင် ကျွမ်းကျင်မှုပိုများလာသော်လည်း အင်တာနက်ဆိုင် မလုံလောက်သည့်အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်စေသည်ဟု မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းတစ်ဦးက ဆိုသည်။
“ကျောင်းအင်တာနက်က ကျောင်းဆရာတွေ ပါမေက္ခတွေလောက်ပဲ သုံးရတာ၊ ကျောင်းသားတွေ အားလုံးက အပြင်ဆိုင်မှာပဲသုံးရတာပေါ့၊ အခုလို ကျောင်းသားတွေ အင်တာနက်မှာရှာပြီး ပြန်ရှင်းပြရတယ်ဆိုတာ သူတို့အရည်းအချင်းတွေ ပေါ်လာတာတော့မှန်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ပြဿနာက အင်တာနက်ဆိုင် မလုံလောက်ဘူး၊ တချို့ကျောင်းသားတွေကျတော့ အင်တာနက် မသုံးတတ်ဘူး၊ ကျောင်းသားတွေ ငြီးနေတာ ကြားနေရတယ်” ဟု ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
မော်လမြိုင်မြို့တွင် အင်တာနက် ၁၀ ဆိုင်ကျော်သာရှိပြီး တစ်ဆိုင်လျှင် ကွန်ပြူတာ ၁၀ လုံးခန့်သာရှိသည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဦးရေးမှာ ၁ သောင်းနီးပါးရှိသည့်အတွက် အင်တာနက်သုံးဆွဲရန် မလောက်မငှ ဖြစ်ရသည်ဟု ကျောင်းသားများထံမှ သိရသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 6:14 AM0comments
လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ။ ။ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့ပေါ်ရှိ မူယစ်ဆေးဝါးအရေင်းအဝယ်အဆက်အစပ်ရှိသူကို ရယကနှင့် မူယစ်ရဲအရာရှိတို့ ငွေကြေးတောင်းပြီး အမှုကိုပိတ်ပင်နေသည်။
ဘုရားသုံးဆူမြို့ ရပ်ကွက် (၃) နေ ဦးအေးသောင်း အသက် (၃၈) နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်အေး အသက် (၃၆) တို့နေအိမ်တွင် ဂျူလိုင်လ (၂၈) ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီ မိနစ် ၃၀ ခန့်မှာ ရပ်ကွက် ရယကအဖွဲ့ဝင် ၆ ဦး ရောက်လာပြီး တစုံတရာမေးမြန်းခြင်းမရှိပဲ အိမ်ကို ဝင်မွှေရှာဖွေသွားသည်။
ထိုဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးတို့သည် ဘုရားသုံးဆူမြို့ပေါ်တွင် မူယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်သည့်အဆက်အသွယ်ရှိသူဖြစ်ပြီး၊ တစုံတယောက်က မူယစ်ဆေးဝါးလိုချင်လျှင် ဦးအေးသောင်းမှတဆင့် ရနိုင်ကြောင်း ကော်မရှင်စားအနေနှင့် ဦးအေးသောင်းက လုပ်စားနေသည်ဟု ထိုရပ်ကွက်နေသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ထိုကဲ့သို့ ရယကမှ ရှာဖွေပြီး တစုံတရာမတွေ့ရှိပဲ ထိုသူနှစ်ဦးကို ရယကရုံးသို့ လာရောက်ရန် ပြောလိုက်သည်။ ရယကမှ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ဇနီးမောင်နှံတို့သွားရောက်ကာ ရုံးတွင် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မရှိသည့်အတွက် အိမ်ကိုသာ ပြန်လာခဲ့သည်။
ထိုနေ့ညနေမှာပင် ရယကမှ နောက်ထပ်ရောက်လာပြီး ထိုနှစ်ဦးကို မူယစ်ရဲအရာရှိ ဦးညွန့်မင်းဦးအိမ်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ထိုအိမ်မှာ ရယကဦးအေးကိုနှင့် အဖွဲ့ဝင် ၆ တို့လည်းရောက်ရှိနေပြီး ထိုသူနှစ်ဦးကို လက်မှတ်ထိုးခိုင်းကာ ဘတ် ၆ သောင်းပေးရမည်ဟုဆိုပြီး မပေးပါက ထောင်ချမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်သည်။
“ငွေပေးဖို့ ခြိမ်းခြောက်တယ်၊ အဲဒီနှစ်ယောက်ကလည်း အပြစ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ ကြောက်တာပေါ့ သူတို့က မူယစ်ဆေးရောင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူး ကော်မရှင်စားပေါ့နော် ဝယ်ပေးတယ် လိုတဲ့လူကို အဲဒီလိုပေါ့၊ သူတို့မှာလည်း ဘတ် ၆ သောင်းမရှိဘူး ကြံဖန်ပြီးတော့ ၅ သောင်းနဲ့ ၈ ထောင် ပေးလိုက်ရတယ်” ဟု ထိုသူနှစ်ဦးနှင့် နီးစပ်သည့် ရပ်ကွက်သားတစ်ဦးက ပြောသည်။
ငွေကြေးကို မတရားတောင်းခံပြီး ထိုနှစ်ဦးကိုလည်း ယခုအဖြစ်အပျက်ကို မည်သူ့ထံမှာ မတိုင်ကြားရန် တိုင်ကြားပြီး ပေါက်ကြားသွားပါက ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူမည်ဟုလည်း ခြိမ်းခြောက်ထားသည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထိုကဲ့သို့ ရယကနှင့် ရဲတို့ပူးပေါင်းပြီး အပြစ်ရှိသူကို ထိထိရောက်ရောက်အရေးမယူပဲ ငွေကြေးတောင်းခံခြင်းဖြင့် အပြစ်ကြေအေးပေးသည့်အကြောင်းကို ဘုရားသုံးဆူရှိ စစ်အစိုးရအဖွဲ့တဖွဲ့က ထိုအဖြစ်အပျက်ကို အထက်သို့တင်ပြရန်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သုံးဆူရှိ အစိုးရအသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရသည်။
“အခုလို ရယကတွေ ရဲနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ မူယစ်ဆေးဝါးအရောင်းအဝယ်သူတွေကို ငွေညှစ်ပြီး အမှုကိုပိတ်နေတာ ငွေပေးရင် ဘာလုပ်လုပ် လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲလေ ဒါပေမဲ့ ဒီမြို့မှာ တခြားအဖွဲ့တွေလည်းရှိသေးတယ် သူတို့ မသိရင်တော့ လုပ်စားလို့ရတာပေါ့ အခုက သူတို့တွေလည်း သိပြီးဆိုတော့ အထက်ကိုတင်မှာပေါ့ ဘယ်လိုလာလဲတော့ မပြောတက်သေးဘူး” ဟု အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 6:13 AM0comments
သုံးဆူနယ်စပ်တွင် တောက်တဲ့ ဈေးကောင်းပြီး ရှာသူများ
လွတ်လပ်သော မွန်သတင်းအေဂျင်စီ ။ ။ တောက်တဲ့ကို ဈေးကောင်းပေး ဝယ်ယူနေခြင်းကြောင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူမြို့တွင် တောက်တဲ့ရှာသူ အလွန်ပေါများကြောင်း မြို့ခံများက ပြောကြသည်။
အိမ်နေတောက်တဲ့၊ တောနေတောက်တဲ့ စသည့် မည်သည့်တောက်တဲ့မျိုးကိုမဆို ဝယ်ယူနေပြီး အနည်းဆုံး (၃၀၀) ဂရမ် (၂၀ ကျပ်သားခန့်) ရှိသော တောက်တဲ့ကြီးများကိုသာ ဝယ်ယူကြောင်း၊ အနာအဆာမရှိသော တောက်တဲ့အရှင်ကိုသာ ဝယ်ယူကြောင်း သုံးဆူမြို့မှ တောက်တဲ့ဝယ်သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။
“လာရောင်းတဲ့လူတွေက အများကြီးပါပဲ့၊ ဒါပေမယ့် သုံးခစ် (၃၀၀ ဂရမ်) ပြည့်တဲ့ တောက်တဲ့တစ်ကောင်ပဲ ရသေးတယ်” ဟု သူမက ပြောသည်။
(၃၀၀-၄၀၀) ဂရမ်ရှိ တောက်တဲ့တစ်ကောင်ကို ထိုင်းငွေ (၅၀၀၀) ဘတ်၊ ကီလိုဝက် (၅၀၀) ဂရမ် (၃၀ ကျပ်သားကျော်) ရှိပါက (၇၀၀၀) ဘတ် ပေး၍ ဝယ်ယူလျက် ရှိသည်။
ဘုရားသုံးဆူနယ်စပ်မှ ဝယ်ယူ ရရှိပြီးသော တောက်တဲ့များကို ထိုင်းလူမျိုးများက လက်ရှိဝယ်ယူထားသော ဈေးထက် နှစ်ဆပေး၍ ဝယ်ယူကြောင်း တောက်တဲ့ဝယ်သူနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
လာရောက်ဝယ်သူ ထိုင်းလူမျိုးများက တောက်တဲ့အန်ဖတ်သည် HIV/AIDS ရောဂါ ကုသရာတွင် အသုံးဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။
“ကျမတို့မှာ လာဝယ်တဲ့ ထိုင်းတွေ ပြောတာက ဒီက ဝယ်သွားတဲ့ တောက်တဲ့ကြီးတွေကို တစ်နှစ် ပြန်မွေးတယ်၊ နောက်အဲဒီတောက်တဲ့က ရတဲ့ အန်ဖတ်တွေကို ဆေးဖော်တယ်” ဟု အထက်ပါအမျိုးသမီးက ပြောသည်။
အနောက်တိုင်း ဆေးပညာအရ တောက်တဲ့ကို HIV/AIDS ရောဂါ ကုသနိုင်သည့် အထောက်အထား မတွေ့ရှိကြောင်း၊ ထိုင်းလူမျိုးများက စားသောက်ဖွယ်ရာအဖြစ် အသုံးပြုလေ့ ရှိကြောင်း ဘုရားသုံးဆူမှ ဆေးပညာရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ဇူလိုင်လလယ်မှ စ၍ ဘုရားသုံးဆူတွင် တောက်တဲ့ကို စတင် ဝယ်ယူနေပြီး အနာအဆာ မရှိသော တောက်တဲ့အရှင်ကို ရရန်အတွက် သံမဏိကြိုးကွင်းပျော့ကို အသုံးပြု၍ ဖမ်းယူရကြောင်း၊ ဖမ်းသူများပြားသည့်အတွက် ယခုသြဂုတ်လဆန်းမှ စ၍ ရဲစခန်းမှ တောက်တဲ့ဖမ်းခြင်း၊ ဝယ်ခြင်းကို တားမြစ်ထားကြောင်း တောက်တဲ့ဖမ်းသူများက ပြောသည်။
“အရင်ကဆို ရဲတွေလည်း တောက်တဲ့ ဖမ်းရောင်းတာပဲ၊ ဒါပေမယ့် တောက်တဲ့အကြီး ရဖို့လည်း မလွယ်ဘူးလေ၊ သူတို့က ကျနော်တို့လို ဟိုမှာရှာဖမ်း ဒီမှာရှာဖမ်း လုပ်ဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ၊ ဝယ်တဲ့လူတွေဆီက အကောက်မရလို့ ပိတ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်မယ်” ဟု တောက်တဲ့ဖမ်းသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
တောက်တဲ့သည် သွေးအေးသတ္တဝါတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ကြွက်၊ တီကောင်နှင့် အင်းဆက်ပိုးမွှားများကို အစာအဖြစ် ဖမ်းယူလေ့ရှိသည်။ လူနေအိမ်ရှိ ချောင်ကြသော နေရာများနှင့် သစ်ခေါင်းပေါက်များတွင် နေထိုင်တတ်သည်။
မြွေကဲ့သို့ အရေခွံလဲတတ်သော သတ္တဝါဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ဥများကိုလည်း ပြန်လည်စားသောက်တတ်သည်။ အန္တရာယ်နှင့် ကြုံတွေ့ပါက ပြန်လည်ကိုက်တတ်ပြီး အိမ်မြှောင်ကဲ့သို့ အမြီးကို ခြွေဖြတ်ထားတတ်သည်။
တရုပ်၊ အင်ဒိုနှင့် ဂျပန်လူမျိုးများက တောက်တဲ့ကို လာဘ်လာဘ ကောင်းသော အိမ်မွေးသတ္တဝါအဖြစ် ယုံကြည်ကြပြီး တရုပ်ဆေးကျမ်းများ၌ ဆေးဖက်ဝင်သော သတ္တဝါဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 6:12 AM0comments